सौर ग्राहक परामर्श शीर्षक कभर गर्न - किम्रोय बेली समूह
सौर्य ऊर्जा अझै पनि धेरै व्यक्तिहरूको लागि नयाँ नयाँ अवधारणा हो। एक सम्भावित ग्राहकसँग धेरै प्रश्नहरू हुन्छन् ताकि तपाईं उनीहरूको सबै प्रश्नहरूको आत्मविश्वासपूर्वक जवाफ दिनको लागि तयार हुनुपर्दछ। एक परामर्श समयमा एक राम्रो पहिलो प्रभाव तपाईं एक प्रतिस्पर्धी माथि रोजगार प्राप्त बीचको भिन्नता हुन सक्छ। त्यसो भए यहाँ मुख्य क्षेत्रका बारे केही सुझावहरू छन् जुन तपाईं र तपाईंको ग्राहकले सौर ग्राहक परामर्श सत्रको बखत छलफल गर्नुपर्छ। त्यहाँ चार सरल र सीधा विषयहरू छन् जुन सौर ग्राहक परामर्शको बखत छलफल गर्नुपर्नेछ। यी विषयहरू हुन् किन तिनीहरू सौरमा जान्छन्, तिनीहरूको सौर लक्ष्यहरू के हुन्, तिनीहरूलाई कति थाहा हुन्छ, ग्राहक बजेट के हो र उनीहरूले आफ्नो बजेटको लागि के प्राप्त गर्न सक्छन्? अब, हामी सिधै यसमा जाऔं।
सौर ग्राहक परामर्श शीर्षक # १: तिनीहरू किन सौरमा जाँदैछन्?
उत्तर पहिले स्पष्ट देखिन्छ - तिनीहरू आफ्नो ऊर्जा बिलमा पैसा बचत गर्न चाहन्छन्। जहाँसम्म, त्यहाँ प्राय: अन्तर्निहित प्रेरणा छन् उनीहरूको घरमा सौर थप्ने छनौट गर्नका लागि। पृष्ठभूमि कथा प्राप्त गर्न को लागी कोशिश गर्नुहोस्- के तिनीहरू पावर कम्पनीहरूले धोका दिएको महसुस गर्छन्? के तिनीहरूका छिमेकीहरू वा मित्रहरूले हालसालै सौर्य ऊर्जा प्रणाली स्थापना गरे? के तिनीहरू कर छूट वा विशेष कम लागत loansण प्रणालीको लागि भुक्तानी प्राप्त गर्दै छन्? के उनीहरूले उनीहरूको ज्ञात सम्पत्ति मूल्य बढाउन खोजिरहेका छन्? के तिनीहरू वातावरणीय सचेत छन्? पृष्ठभूमि कथा पाउनुले तालमेल बनाउँछ र तिनीहरूको आवश्यकताहरूलाई दिमागमा राखेर एउटा प्रणाली डिजाइन गर्न मद्दत गर्दछ।
सौर ग्राहक परामर्श शीर्षक # २: उनीहरूको सौर्य ऊर्जा प्रणालीबाट उनीहरू कस्तो प्रदर्शनको आशा गर्छन्?
परामर्श सत्रको यो क्षेत्र धेरै महत्त्वपूर्ण छ किनकि प्रायः ग्राहकहरूको सौर्य ऊर्जा प्रणालीको बारेमा उनीहरूले अव्यावसायिक अपेक्षा गर्छन्। तसर्थ, तपाईंले सबै बेसहरू कभर गर्नु पर्छ जस्तै: ग्रिड टाई बनाम अफ-ग्रिड प्रणाली, उपकरणहरू जुन प्रणालीले पावर गर्दछ, बादल दिन, ब्याट्री क्षमता र ब्याट्री मर्मत, प्रणाली ओभरलोडि and र शक्ति गुमाउने आदि।
यी क्षेत्रहरूमा डाइभ डाइभिंग र सौर्य ऊर्जा प्रणालीको क्षमताहरू स्पष्ट कुराकानी गर्दा पछि ग्राहकहरू पश्चाताप गर्नबाट बच्नेछ। म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तपाईले लिखित पर्चाहरू यी बारम्बार सोधिने प्रश्नहरूको उत्तरहरूको साथ प्रस्ताव गर्नुहोस्।
सौर ग्राहक परामर्श # 3: तिनीहरूलाई कति थाहा छ?
यस्तै निष्पक्ष लगानीको साथ, तपाईं शर्त लगाउन सक्नुहुन्छ तिनीहरूले केही अनुसन्धान गरेका छन्। त्यसैले सम्भावित ग्राहकलाई निम्न गुणस्तरको सामानहरू दिन कोशिस नगर्नुहोस्- जबसम्म ग्राहकले सस्तोमा केहि सस्तो चाहँदैन। त्यहाँ बजारमा इन्भर्टर र ब्याट्रीहरूको उच्च गुणवत्ताका ब्रान्डहरू छन्। जब तपाईं इन्भर्टरहरू कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, आउटब्याक, स्नाइडर र सामलेक्स जस्ता ब्रान्डहरू धेरै राम्रो मानिन्छन्। जब रोल्स ब्याट्री ब्याट्री भण्डारण मा सुनको मानक मानिन्छ। यस पैसाको खर्च गर्ने ग्राहकहरू जसमा अमेरिकी १०,००० वा सोभन्दा बढी गुणको लागि उत्सुक छन्।
सौर ग्राहक परामर्श #:: तिनीहरूको बजेट के हो र यसले तिनीहरूलाई के प्राप्त गर्न सक्दछ?
बजेटको बारेमा छलफलले ग्राहकले प्रीमियम उपकरणहरू किन्न सक्षम छ कि छैन भनेर निर्धारण गर्दछ।
11नोभेम्बर नोभेम्बर 11, 2012
मेरो स्नातक कहानी
मेरो परिवार: किथ बेली, डोरकास बेली, किम्रोय बेली र लेकिथ बेली नोभेम्बर,, २०१२ मा मैले मेरा स्नातकहरू प्राप्त गरें ... थप पढ्नुहोस्